ရီဝေဝေမြို့ပေါ်က ကောင်မလေးဖတ်ဖို့ (၂)
အမနာပ တံလျှပ်တွေကို ရေထင်
မစ္ဆရိယ ပင်လယ်ရဲ့ အောက်ဆုံးကြမ်းပြင်မှာ
တကိုယ်စာ အသက်ရှုပေါက်လေးကို ဖောက်ထုတ်
မတည်မြဲတဲ့ ”စည်းစိမ်”ကို စိတ်ပေါ်မှာ တံဆိပ်ကပ်
”ဘို့” တလုံးတွက်လည်း ရုန်းထွက်ရက်ခဲ့တယ်နော်…
အသုံးအနှုန်းခပ်လှလှ Method တွေနဲ့ ပရိူဂရမ်တွေတွက်ချ
မျက်ရည်ပင်လယ်လောက်ကျပြပြီး ငါ့အသက်ကို ခြေထိုးခံ
နောက်ကျောကို ဓါးနဲ့ထိုးဖို့ရန်လည်း လက်မရွံ့
သိက္ခာကို အသပြာအတွက်လည်း စွန့်ဝံ့ခဲ့တယ်နော်….
မင်းရဲ့ အိပ်မက်လှလှတွေ အဓွန့်ရှည်ဖို့အတွက်
ငါ့ရဲ့ ပြက္ခဒိန်တွေကို တရွက်ချင်းဆွဲစုတ်
မင်းရဲ့ မာယာတွေကို တရွက်ချင်းဆွဲထုတ်ပြီး နံရံပေါ်မှာကပ်
ငါ့ရဲ့ မျှော်လင့်ခြင်းအသက်ကို တရက်ပြီး တရက်ဖြို
တလပြီး တလ သစ္စာဖောက်ပြီး ဝါးမြို
တနှစ်ပြီး တနှစ် မီးသဂြိုလ်ရက်ခဲ့တယ်နော်….
ကိုလေးဖြူရဲ့ ”စာမျက်နှာတစ်ဆယ့်ငါး” သီချင်းစာသားတွေနဲ့
ကိုယ်ငှက်ရဲ့ ”အမေ့အိမ်” သီချင်းစာသားတွေနဲ့
Posted by ဆောင်းယွန်းလ at 6:08 PM
အဲဒီကောင်မလေးကို ကြားထဲက ဝင်မုန်းလိုက်တယ်ဗျာ..:P
ငါဟာ နာကျင်ခြင်းများစွာနဲ့ အဖြေတခုကိုရှာ
ဝင်မိတဲ့ ဒီအခန်းထဲ ပျော်အောင် အိပ်လိုက်...
Rဇာနည် သီချင်းလေးနဲ့ အကို့ကဗျာကို ခံစားပီး ဖတ်သွားတယ်နော်
ခုတော့ ရင့်ကျက်သွားပြီပေါ့။ မရင့်ကျက်ခင်က ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေကို ပြန်လွမ်း တမ်းတ မင်းအတွက် ကဗျာလှလှလေး ၂ ပုဒ်ရေးလိုက်တယ်ပေါ့။ ဟုတ်လား ကိုဆောင်း။ အမှန်အတိုင်းဝန်ခံရရင် ကျနော်က အချစ်ကဗျာတွေကို ပိုကြိုက်တယ်ဗျ။
ကိုဆောင်းရေ ကဗျာလေးကို နှစ်သက်စွာ ဖတ်ရူသွားပါ
ကဗျာကောင်းတစ်ပုဒ် စီးဝင် ပူး ကပ် ပြီကော
ဘယ်ကောင်မလေးပါလ်ိမ့် ။ စဉ်းစားစရာပဲ ။ :P
ကဗျာအရေးလေး ကြိုက်ဗျာ ။
အကိုဆောင်းယွန်းရေ.. ကဗျာရဲ့စာသားတွေကောင်းတော့ ကောင်မလေး အပေါ်တောင်မှ...အမျက်သင့်မိတယ်။
( အကိုဆောင်းယွန်း CBOX မှာရေးလိုက်ရင် အကိုမမြင်မှာစိုးလို့ .. ဒီမှာရေးလိုက်တယ်.. ဘလော့နားမဲ့အတွက် ကွန်မန့်ရေးပြီး အားပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်..
အကို့ရဲ့ “မောင်းနှင်မှုလောင်စာဖြင့်“ ကဗျာထဲက စာသားလိုပေ့ါ.. “ကိုယ်ဟာ ဘဝသုံးစင်းရဲ့ ခေါင်းတွဲ၊ ကံနည်းနည်းများများ ရှေ့ကိုခုတ်မောင်း “
ကျနော့်အတွက်ကတော့ ခေါင်းတွဲမဟုတ်ပေမဲ့ ဒီရထားတစီးလုံး ခုတ်မောင်းရာမှာ အဆင်ပြေချောမွေ့စေအောင် ကိုယ့်တာဝန်ကို ကိုယ်ထမ်းရတဲ့သဘောမို့.. ဝါသနာကို နည်းနည်းလျော့ပြီး ဘဝအတွက်အချိန်ပိုပေးလိုက်တာပါ... အကိုတို့စာတွေကိုတော့ မပြတ်အားပေးနေဦးမှာပါ
အပေါ်က comment ရေးသူတွေ ကိုဆောင်ယွန်း ကို
အထင်တွေ စွတ်ကြီး ကုန်ပြီ...း )..
မဟေသီရော ..ရောယောင် နှာကောက်နေပြီလား..း)
ကဗျာဆရာက ..သူနေတဲ့ မြို့လေး.. သူအမြဲ မကျေမနပ်ဖြစ်နေတဲ့ မြို့လေး ကို ပြောချင်တာ ..
ဟုတ်တယ် ဟုတ်....း)
ကိုဆောင်ယွန်းရေ ..ပျော်စရာကြီး ..း).. အထင်ကြီးခံရ လဲ နဲဘူးနော်..း)
ရင့်ကျက်တတ်ချင်တယ်။ ဒါပေမယ့် မရင့်ကျက်ခဲ့ဘူး။
မုန်းတတ်ချင်တယ်။ ဒါပေမယ့် နှလုံးသားကျမ်းစာက အချစ်တွေဘဲ ပြဌာန်းပေးခဲ့တယ်။ အရာရာဟာ ကံစီမံရာအတိုင်းပါဆိုရင် အဲဒီ့ကံကို ပြန်စီမံနိုင်မယ့် နေ့တစ်နေ့ကို ကျွန်တော်တို့ ချီတက်ကြပါစို့။
Beginner ဘ၀မှာမို့ တွေ့သမျှကိုလေ့လာခဲ့ရသူပါ ဒီဘလော့လေးကို ရောက်လာတော့လဲ စိတ်ထဲမှာ ကြည်နူးပိတိတွေ ဖြစ်မိပါရဲ့........ပျော်ရွင်စရာတွေကို ဆောင်ယူပေးခဲ့လို့ ထာဝရမမေ့နိုင်ပါနော်.......